တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖိုရမ်ကျင်းပ - ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းအရာများကို ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ကို အတူတကွ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မည်ဟုဆို - Xinhua News Agency
၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖိုရိမ်ကို ဇွန်လ ၂ ရက်၌ မြေပြင် နှင့် အွန်လိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖိုရမ်တက်ရောက်ခဲ့ကြသောသူများက တရုတ် နှင့် အာဆီယံနိုင်များမှ မီဒီယာများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များကို အသုံးပြု၍ နှစ်ဘက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းအား ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြကြပြီး တရုတ်-အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။အခမ်းအနားကျင်းပသောနေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှ အရာရှိများ ၊ ပညာရှင်များ ၊ မီဒီယာ နှင့် Think tank အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များက ဖိုရမ်အား တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး “ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့်ချိန်မှစ၍ တရုတ်-အာဆီယံ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း” ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နှီးနှောဖလှယ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်တီ ပြန်ကြာရေးဌာန ဒုတိယ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ထန်းဟိန် က ဖိုရမ်အား တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖိုရမ်အား မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားဘာသာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းဌာန ( China International Publishing Group ,CIPG) ဌာနမှူး သူ့ကျန့်ယွင် က ယခုနှစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံအကြား ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့သည့် နှစ် ၃၀ ပြည့်နှစ်ဖြစ်ကြောင်း ၊ မီဒီယာကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး၏ အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၊ နှစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တွန်းအားပေးရန် နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေး တိုးတက်မှုအတွက် အလွန်အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍ၌ ပါဝင်နေကြောင်း ၊ နှစ်ဘက်မီဒီယာအကြား ဖလှယ်မှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ လွန်စွာကျယ်ပြန့်ပြီး အလွန်ကြီးမားသည့် အလားအလာ တည်ရှိနေသဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းအရာများကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းအောင် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ကဏ္ဍ တိုးချဲ့ခြင်း ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပြုလုပ်ခြင်း တို့ဖြင့် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားပြီး တရုတ်-အာဆီယံ အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဉာဏ နှင့် ခွန်းအားတို့အား ပေးဆပ်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဆီယံ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် Kung Phoak က COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း အာဆီယံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တို့၏ အားကောင်သော မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမှာ အတားအဆီး မဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ၊ လက်ရှိချိန်တွင် နှစ်ဘက်၏ နယူးမီဒီယာကဏ္ဍ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားစွာ ဖြစ်တည်နေပြီး မီဒီယာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးချဲ့ခြင်းက နှစ်ဘက်အနာဂတ်တွင် ပိုမိုကြီးမားသည့် တိုးတက်မှုရရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူ ပြုစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Kambao Ntawan က အာဆီယံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ မီဒီယာတို့သည် နှစ်ဘက်တို့၏ အဓိက သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်မှု နှင့် သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်တို့ဖြစ်ကြပြီး လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အခြားကဏ္ဍအသီးသီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အလွန်အရေးပါသည့် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ၊ မီဒီယာများအနေဖြင့် လက်ရှိတည်ရှိပြီးဖြစ်နေသည့် ထိရောက်သော စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အာဆီယံ-တရုတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ပိုမိုကြီးမားသည့် ထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်-အာဆီယံ စင်တာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ချိန်သယ်ဟိုင် က တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးသည် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အောင်မြင်သည့် စံနမူနာဖြစ်ကြောင်း ၊ နှစ်ဘက် မီဒီယာများအနေဖြင့် တရုတ်-အာဆီယံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအကြောင်းအရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖော်ပြသွားပြီး တရုတ်-အာဆီယံ မူဝါဒညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ် ချိတ်ဆက်မှု တို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသွားကာ မီဒီယာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ တိုးချဲ့သွားစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအကြိမ်ဖိုရမ်အား China International Publishing Group နှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စင်တာ တို့က ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး နှင့် တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် သံအမတ်ကြီး တို့က တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း ၊ ဖိုရမ်တွင် အခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် ဧည့်သည်တော်များရှေ့မှောက်တွင်《KEYWORDS TO UNDERSTAND CHINA : Foreign Affairs in New Era》တရုတ်ဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာအုပ်အား ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ (Xinhua)
1. 2021中国—东盟媒体合作论坛现场 新华社记者王宾摄
2. 东盟秘书处副秘书长康富在论坛上以视频方式致辞 新华社记者王宾摄
3. 论坛上发布的《中国关键词：新时代外交篇》中英对照版图书 新华社记者王宾摄